ShweMinThar: နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အလုပ်တွဲလုပ်သောအခါ…
မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၁၄ထဲမှာဝင်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေက အလွန်ကိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများလာတဲ့အတွက်အလွန်ပဲဝမ်းမြောက် မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မြင်တွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ နိုင်ငံခြားသားများရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကွာခြားခြင်းဆိုတဲ့ပြသနာပါပဲ။ မြန်မာတွေကလည်း ဒီကောင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာ အရမ်းအာရုံနောက်တယ်၊ ရစ်တယ်တို့ပြောတတ်သလို၊ သူတို့ရဲ့မျက်လုံး ထဲမှာလည်း ကျွန်တော်တို့တွေကို အထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေကို မြင်ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ
ကို ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးအနည်းငယ်ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ တော့အနောက်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်၊ဂျာမနီ၊နယ်သာလန်စတဲ့သူမျိုးတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးပြောပြသွားမှာပါ။ တရုတ်တွေနဲ့တော့အလုပ်တွဲမလုပ်ဖူးပါ၍ ဒီဆောင်းပါးမှာ အနောက်နိုင်ငံသား များနှင့် ဆက်ဆံရေးကိုသာအဓိကထားပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းတယ်ဆိုတာက ရိုးအတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပါးပါးနပ်နပ် ပွင့်လင်းတာကိုဆိုလိုတာပါ။ အင်တာဗျူးထဲကစပွင့်လင်းရမှာပါ။ ဥပမာ သူ့အလုပ်ခေါ်ကြော်ငြာမှာ လစာက ၁၂၀၀၀၀ နဲ့ ၁၈၀၀၀၀ ကြားဆိုပါစို့။ သင်က(၂)သိန်းလောက်လိုချင်တယ်ဆိုပါစို့။ အင်တာဗျူးလည်း မေးပြီးပြီ။ သင့်ကိုလည်း သဘောကျပြီဆိုရင်သင့်ကိုလစာကိစ္စစဆွေးနွေးတော့မှာပါ။ အဲဒိအချိန်မှာတော့ သင့်အရည်အချင်းကို သင်ယုံကြည်ရင် လစာကိစ္စကို တစ်ခါတည်းဆွေးနွေးပါ။ သင်မပျော်ရွှင်နိုင် လောက်မယ့် လစာမျိုးနဲ့ လက်မခံပါနဲ့။ ဘယ်အချိန်လောက်မှာတိုးပေးနိုင်မလဲဆိုတာပါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးပါ။
ဘာလို့လစာအကြောင်းပြောရလဲ ဆိုတော့ ဒီပြသနာကအဖြစ် များလို့ပါ။ ပေးတဲ့လစာနဲ့လုပ်ရတာက မတန်တာတွေ လုပ်ရတဲ့ အခါ ပြောလို့လည်းမရ နောက်ဆုံးစိတ်ညစ်ပြီးအလုပ်ထွက် သွားတာ မျိုးတွေတွေ့ဖူးလို့ပါ။ သင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုအားမနာတမ်းမေးပါ။ သင်လုပ်ရမှာနဲ့ သင်ရတဲ့လစာထိုက်တန်မှ လက်ခံပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ“လုပ်ရတဲ့အလုပ်နဲ့လစာမတန်ပါဘူးကွာ”လို့ပြောနေလည်း စိတ်ဆင်းရဲယုံက လွဲပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။
အလုပ်ခွင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပွင့်လင်းပါ။ သူခိုင်းတိုင်း ခေါင်းညှိတ်ပြီးလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ယုတ္တိမရှိတဲ့
အရာများဆိုရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ပါးနပ်စွာပြန်တိုင်ပင်ပါ။ သူတို့က အဲ့လိုတိုင်ပင်တာကိုကြိုက်ပါတယ်။
ရုံးချိန်ကိုတိတိကျကျလာပါ။ မြန်မာတွေရဲ့ထုံးစံက နောက်ကျတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာတော့ နောက်ကျတယ်ဆိုတာအရမ်းရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါ့ကြောင့် တတ်နိုင်သလောက်နောက်မကျ ပါစေနဲ့။ ရုံးကို ၁၀မိနစ် ၁၅မိနစ်စောရောက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ နောက်ကျရင် ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်ချနေသလိုပါပဲ။ တစ်ချို့က ကားကျပ်လို့နောက်ကျတယ်လို့ ဆင်ခြေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကားကျပ်ရင် အိမ်ကစောထွက်ပါ။
ကားကျပ်တာဆင်ခြေတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အလုပ်နဲ့ ကျွန်တော့်နေတဲ့နေရာနဲ့ မိနစ်၂၀ပဲ ဝေးပါတယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မိနစ်(၂၀)လောက်စောပြီး ရုံးရောက်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကာကွယ်တာပါ။ သင်အချိန်မှန်ရင် သင့်ကိုသင့်Bossက လေးစားပါတယ်။ အချိန်နဲ့ပက်သက်ပြီးတိကျရုံမက အခြားအရာတွေမှာလည်း တိကျပါ။ ဥပမာ သင်ကသောကြာနေ့တိုင်း သင့်သူဌေးဆီ အီးမေးလ်ပို့တယ်ဆိုပါစို့။ အချိန်မှန်အောင် မပျက်မကွက် အောင်ကြိုးစားပါ။
သူတို့အမေးဆုံးမေးခွန်းကတော့ Why?ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေလိုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းအတွက် ယုတ္တိရှိတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုသူတို့အမြဲလိုချင်ပါတယ်။
သင်က ယုတ္တိရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်အမြဲပေးနိုင်ရင်သင့်ကိုယ်သဘောကျလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ Why? လို့မေးတိုင်း ဘာမှမဖြေတတ်ရင်တော့ ရေရှည်အတွက်မကောင်းပါဘူး။
#Any questions? Any suggestions? လို့မေးရင် နှုတ်ဆိတ်မနေပါနဲ့။
သူတို့က သင့်ကို Any questions? Any suggestions?လို့အမြဲမေးလေ့ ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက် ကိုလိုချင်တာပါ။ အဲ့ဒိအချိန်မှာ မြန်မာအများစုက ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ဘာမှပြောလေ့မရှိပါဘူး။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ ငယ်ငယ်လေးထဲကဆရာ၊ဆရာမတွေက မေးခွန်းပြန်မေးရင်မကြိုက်ခဲ့လို့ပါပဲ။ အဲ့ဒိပညာရေး စနစ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအမြဲတမ်း မေးခွန်းမမေးတတ်ကြပါဘူး။ တကယ်တော့ ကိုယ့်Boss ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကို စဆွေးနွေးနေပြီ ဆိုကတည်းကကိုယ်ကစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ရင် မေးခွန်းတွေမေးစရာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကျိုးအကြောင်းဆီလျော်တဲ့မေးခွန်းမျိုးမေးတတ်ပါစေ။ သင့်ရဲ့သဘောထားကိုသူတို့က တလေးတစားမေးတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါ။
Sorry, Thank you, Execuse me စသဖြင့်သင့်တော်တဲ့နေရာမှာသုံးတတ်ပါစေ။ “Of course!”ကိုသုံးတတ်ပါစေ။
တစ်ချို့က အဲ့ဒိ “Of course!” ကိုအရမ်းသုံးကြပါတယ်။ “Of course!”ကို အသံပြင်းပြင်းနဲ့ အသံထွက်ရင် ရိုင်းပါတယ်။
ဥပမာ နေ့လည်၂နာရီလောက်မှာ သင့်Bossကသင့်ကို “Have you finished your lunch?”လို့မေးတယ် ဆိုပါစို့။ “Of course!”ကိုအသံပြင်းပြင်းနဲ့ အသံထွက်ရင် အဓိပ္ပါယ်က “စားပြီးပြီပေါ့ ဒီအချိန်အထိမစားပဲ နဲ့ငါကဘာလုပ်နေရာမှာလဲ” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်မျိုးပေါက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အတွေ့အများဆုံး အသုံးအနှုန်း အမှားလေးကို အလျင်းသင့်လို့ရှင်းပြသွားတာပါ။
သင်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ထက် အများကြီးပိုလုပ်မပြပါနဲ့။ သူတို့က အဲ့ဒါသင့်ရဲ့အ နိမ့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်လို့ ယူဆသွားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာသင့်ကတစ်နေ့ကို ဆောင်းပါး ၂ပုဒ်ရေးနိုင်တယ်ဆိုပါစို့။ သင်က လောဘတကြီးနဲ့ ရုံးစရောက်ရောက်ချင်းမှာ ဆောင်းပါး (၅)ပုဒ်လောက်တစ်နေ့တည်း ရေးပြလိုက်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်း(၅)ပုဒ်ဆိုတာ သင်တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံးရေးရမယ့် အရေအတွက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ပါးနပ်ပါစေ။
သင့်ကိုခိုကပ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်မှာရှိတဲ့ ခွန်အားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုထမ်းဆောင်ပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုထမ်းဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ချက်ချင်းကြီး မပါးမနပ်နဲ့ အများကြီးလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။
သူတို့ဆီကနေသင်ယူတာကို သူတို့ကသဘောကျပါတယ်။ သင့်ကို သင်ယူလိုစိတ်ရှိတဲ့သူအဖြစ်နဲ့ သူတို့သဘောကျပါလိမ့််မယ်။ မသိရင်မေးပါ။ မသိပဲနဲ့ ရမ်းသမ်းမလုပ်ပါနဲ့။ သူတို့ဆီက သေသေချာချာပြန်မေးပါ။
English စာမပိုင်ခြင်းကလည်း ရုံးမှာသူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါ အတော်ဒုက္ခပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်အခု
Englishစာမကောင်းသေးလည်း ကြိုးစားဖို့ အချိန်မှီပါသေးတယ်။ တခါတလေ တွေ့နေရတာတွေကတော့
Misunderstanding လို့ခေါ်တဲ့ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းပါပဲ။ ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့် တခါတလေမလိုအပ်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အထက်ပါအချက်များက ပြည့်စုံချင်မှပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်လုပ်ဖော်တွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ အသုံးဝင်ပါလိ့မ်မယ်။ ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး လစကောင်းကောင်းရရှိနိုင်သောဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။